कान्छा वडाध्यक्षका पाका योजना
(पर्बतका निर्बाचित जनप्रतिनिधिहरु को छोटो परिचय र उनीहरु ले निर्बाचित भएपछि गरेका कामहरु, चुनौती र भबिष्यका योजना समेटिएको हाम्रा जनप्रतिनिधि सुरु गरेका छौ)
कुश्मा नगरपालिकाका १४ वटा वडामध्ये कुश्मा ७ का वडाध्यक्ष सुवासचन्द्र पौडेल सबैभन्दा कान्छा वडाध्यक्ष हुन् । उमेरले कान्छा भएपनि उनको कार्यशैली, निर्णय, योजना र भूमिका सबैभन्दा पाको रहेको चर्चा सुनिन्छ । उनी आफ्नो वडालाई र समग्र नगरपालिकालाई कस्तो बनाउन चाहान्छन् । उनले चुनावको बेला गरेका वाचा कति पुरा भए कति अधुरा । वडामा उनले शुरु गरेका प्रगतिका जगहरु के के हुन । पर्वत नेपाल डट.कम.ले वडाध्यक्ष पौडेल संग यसै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरेको छ ।
राजनीति र सामाजिक पृष्ठभूमी
पर्वत जन्मभूमी भएपनि अध्ययनको शिलशिलामा म चितवन पुगे । वि.सं. २०५८ मा चितवन स्थित सप्तगण्डकी बहुमुखी क्याम्पसमा अनेरास्ववियूको सदस्य बने । त्यसपछि २०६१ सालमा चितवनमै अनेरास्ववियूको जिल्ला सम्मेलन आयोजक समितिको संयोजक बनेर काम गरे । राजनीतिक यात्राको क्रममा २०६२ सालमा अनेरास्ववियू पर्वतको अध्यक्ष बनेको थियो । २०६५ सालमा गुप्तेश्वर वहुमुखी क्याम्पसमा स्ववियू सभापती बन्ने अवसर पाएँ । विद्यार्थी राजनीति संगै पार्टिको राजनीतिमा क्रियाशिल बनेको म हाल नेकपा एमालेको कुश्मा नगर कमिटीको सचिवालय सदस्य छु । हाल कुश्मा नगरपालिका ७ को वडाध्यक्ष बनेर जनताको सेवामा लागिरहेको छु ।
चुनावमा गरेका प्रतिवद्धता
चुनावमा गरेका वाचा पुरा गर्न म प्रतिवद्ध छु । चुनावमा गरेका सबै वाचा म अहिले पनि सम्झिरहेको छु । हामीले कुश्मा ७ लाई कृषिको हव बनाउने भनेका थियौँ । तदअनुसार नर्सरी केन्द्र स्थापना भैसकेको छ । हामीले हरेक घरमा तरकारी भनेर तरकारीका विरुवा वितरण गरेका छौँ । उन्नत डालेघाँस र भुईघाँस हरेक घरमा लगाईएको छ । खेलमैदानलाई हामीले अहिले व्यवस्थित गरेर राष्ट्रिय स्तरका खेल खेल्न मिल्ने बनाएका छौँ । गुणस्तरिय शिक्षाको कुरा मैले गरे अनुरुप खरेया प्रावि र यूवावर्ष प्राविमा कम्यूटर ल्याव सहित अंग्रेजी माध्यममा पढाई शुरु भएको छ । अभिभावकमा सामूदायिक शिक्षा प्रति सकारात्मक दृष्टिकोणको विकास गर्न सफल भएका छौँ । सडकको स्तरउन्नतीमा हामीले सोचेको जति सफल हुन सकेका छैनौँ । यो पनि केहि समय पछि सफल हुन्छ । यूवाहरुलाई विदेश गएर हैन स्वदेशमै बसेर खुशी र सुखी बनाउने अभियान अन्तर्गत हामीले कृषि, पशुपालन, व्यवसाय तर्फ आकर्षित गर्ने भनेका छौँ । महिलाहरुलाई हामीले घरमै वसेर अचार बनाउने, तरकारी खेती गर्ने, सिलाईकटाई गर्ने बनाउन तालिम दियौँ । बोल्ने वानीको विकास गर्न तालिम सञ्चालन ग¥यौँ । हामीले विकास आफैँले गर्ने हो अरुको भर पर्ने होईन भन्ने धारणाको विकास गरेको मैले महसुस गरेको छु ।
तपाईको वडा र समग्र कुश्मा नगरपालिकालाई समृद्ध बनाउँन के गर्नुपर्छ ?
हामीले सडकलाई मात्रै विकास मान्ने गरेका छौँ । हुन त सडक नभई अरु विकास त संभव हुन्न । तैपनी मैले के भन्ने गरेको छु भने हामीकहाँ अव नयाँ सडक खन्नुपर्ने आवश्यकता छैन् । हामीले यि सडकलाई स्तरउन्नती गरौँ । दिगो बनाउँ भन्ने गरेको छु । कृषि मुलश्च जीवन भन्ने मन्त्रलाई आत्मासाथ गरेर कुश्मा नगरपालिका भित्रको भौगोलिक विविधता हेरेर हामीले तरकारी, फलफुल, पशुपालन जस्ता व्यवसाय गर्नुपर्छ । कुश्माका बासिन्दा अहिले संघीय संरचना पछि अधिकार गाउँ केन्द्रित भएपछि अत्तालिएका छन् । कुश्मालाई समृद्ध बनाउने हो भने वाँझो जमिनमा खेती गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ, अहिले व्याक्ति संग धेरै जमिन छ । त्यो जग्गा पूजीपतीको हातमा छ । त्यो जग्गा खेतीपातीका लागि प्रयोग गर्ने वाताबरण बनाउनुपर्छ । उत्पादन गरेर मात्रै हुँदैन बजारीकरणको पनि समस्या छ । बजारीकरणको व्यवस्था गर्ने तर्फ पनि हामीले योजना बनाउनुपर्छ ।
तपाई यूवा भएको नाताले यहाँका यूवाले तपाईँबाट ठुलै अपेक्षा राखेका होलान नि ?
पक्कै पनि यूवाहरुले म बाट अपेक्षा गर्नु स्वभाविक हो । मैले यूवाहरुलाई विदेश पठाउने होईन देशमै रोक्नुपर्छ भन्ने गरेको छु । छोरा विहानभरि सुत्ने वुवा खेताला खोज्न हिँड्ने प्रवृतिले हामीलाई जिस्काईरहेको छ । अव यूवाहरु सुत्ने हैन जाग्नुपर्छ भनेर मैले यूवाहरुको हातमा सीप र उद्यम हुनुपर्छ भनेको छु । यूवाहरु गाउँमा ३० हजार रुपैयाँको जागिर पाए काम गर्न तयार हुन्नन् । तर विदेशमा ३० हजार कमाउन जे पनि काम गर्न तयार हुन्छन् । यो विडम्वनाको अन्त्य गर्नुपर्छ । यूवाहरुलाई सामूहिक कृषि, पशुपालन र तरकारी खेतीमा सहभागी गराउनुपर्छ भनेर मैले वडाबाट नगरपालिकामा योजना लगेको छु । मैले वडामा पनि त्यो अभ्यास गरेको छु । ५० लाख खर्च गरेर अमेरिका जाने यूवाहरुलाई सामूहिक लगानी गरेर आम्दानी गर्न सक्ने धेरै बाटो मैले देखेको छु । उनीहरुलाई मैले कसरी आयआर्जनमा सहभागी हुने र दिगो आम्दानी लिने भनेर परामर्श दिने गरेको छु । मेरो वडामै कतिपय यूवाहरु विदेश जाने सोच त्यागेर कृषिमा लागेका छन् । कतिपय मेरो सुझाव अनुसार पशुपालनमा लागेका छन् । म आफैँ पनि पशुपालक कृषक हो । मैले गाईपालन गर्दा धेरैले मान्छेले पढेको मान्छेले गोबर फाल्ने, दुध वेच्ने हिँड्ने भनेर कुरा काट्थे । तर मैले लाज मानिन । दृढ संकल्प लिएर व्यवसायमा लागे । अहिले सबैले मेरो प्रसंसा गर्न थालेका छन् । मैले यहिँ मिहेनत गरे धनी बनिन्छ भनेर व्यवसाय शुरु गरेपछि पछि फर्किनु परेको छैन । अरु यूवाहरुलाई मेरो सिको मात्रै गरे पनि धेरै प्रगति गर्न सकिन्छ भनेर मैले भन्न चाहान्छु । हाम्रो वडामै साउन र असोजमा दुई जना यूवा विदेशमा मृत्यु बरण गर्नुपरेको छ । त्यसपछि हामीले अव विदेश जाने यूवाहरुलाई जनचेतना जगाउनुपर्छ भन्ने सोच बनाएको छु । नगरपालिकाको तर्फवाट यूवा केन्द्रित कार्यक्रम ल्याएर हामीले यूवाहरुलाई उद्यम तर्फ आकर्षित गर्दै छौँ । मैले व्याक्तिगत रुपमै पनि यूवाहरुलाई सामूहिक लगानी तर्फ आकर्षित गदैै पनि छु ।
तपाईलाई वडासदस्यहरुको साथ कस्तो छ ?
एकदमै राम्रो साथ छ । विकास मेरो एक्लो प्रयासले संभव छैन । जनतालाई सेवा दिने सवालमा मेरो जति जिम्मेवारी छ त्यति नै जिम्मेवारी वडासदस्यहरुको पनि छ । कुनै काम गर्दा मैले उहाँहरुसंग साथ माग्नुपर्छ । उहाँहरुले मलाई कुनै कुरामा अवरोध गर्नुभएको छैन् । हामी यहाँ एकल वहुमतमा छैनौँ । तर सबैजनाले विकासका काममा कुनै राजनीतिक ईगो राखेका छैनौँ । हामी वडालाई नमूना बनाउन लागेका छौँ । सबैको साथ र सहयोगले नै वडालाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ । वडालाई समृद्ध बनाउने योजनामा सदस्यहरुले निकै सहयोग गर्नुभएको छ । वडावासीहरुको पनि राम्रो साथ पाईरहेको छु ।
सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल भनेर मात्रै संभव छैन् । यसका लागि हामी सबैले काम गर्नुपर्छ । हामीले अनियमितता, भष्ट्रचार, ढिलासुस्तीलाई हटाउनुपर्छ । हामीसंग स्रोत साधान धेरै छन् । हामीले हाम्रा स्रोत साधानहरुको प्रयोग गर्न जानेका छैनौँ । हामी आफैँले केहि गदैैनौँ अरुले केहि गरिदिएला भनेर आशा राख्छौँ । त्यो गलत हो । त्यसैले सबैलाई आफैँले केहि गरौँ । मिहेनत गरौँ । संभावनाको खोजी गरौँ । अन्तमा सबै नेपालीहरुमा विजयादशमी तथा दीपावलीको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।
कृषि र पर्यटनको माध्यमवाट वडालाई समृद्धि बनाउने छौँ : वडाध्याक्ष क्षेत्री 1360
जग बसालेका काम पाँच वर्षमा पुरा हुन्छन् 917
हाम्रो ध्यान जनताका आवश्यकता तर्फ - दिपक पौडेल 973
रानीपानीको मुहार फेर्ने वडाध्यक्षको अठोट 1641
कान्छा वडाध्यक्षका पाका योजना 1885